‘छक्का पन्जा’ को रेकर्ड तोड्ला ‘कृ’ ले ? | Jukson
‘छक्का पन्जा’ को रेकर्ड तोड्ला ‘कृ’ ले ?
गएको वर्ष रिलिज भएको सुपरहिट फिल्म ‘छक्का पन्जा’ले प्रदर्शनको सय दिनमा १७ करोडको आसपासमा व्यापार र्गयो । यसलाई नेपाली फिल्म इतिहासको सर्वाधिक व्यापार गर्न सफल फिल्मको रुपमा लिइएको छ । यो रेकर्डलाई प्रदर्शनको २१ दिनमा तोड्ने दावी गरेका थिए ’लुट २’ निर्माता माधव वाग्लेले तर उनको त्यो सपना अधुरै रह्यो । ‘लुट २’ को लाइफटाइम कलेक्शन ७ करोडमाथि रहेको बताइएको छ । सबैलाई आश पनि थियो यदी ‘छक्का पन्जा’को व्यापारिक रेकर्ड कसैले तोड्छ भने त्यो ’लुट २’ नै हो । तर, सबैको आश निराशामा परिणत भयो ।
अब कसले तोड्ला ’छक्का पन्जा’को रेकर्ड ? ’छक्का पन्जा’को रेकर्ड तोड्नका लागि नेपाली फिल्मले १८ करोड ग्रस कलेक्शन गर्नुपर्छ । के यो संभव छ ? अहिले सबैको ध्यान कात्तिक ३ गतेतर्फ मोडिएको छ । किनकी यो मितिमा रिलिज हुँदैछ फिल्म ’कृ’ । झण्डै पर्दामा डेढ वर्षपछि फर्किएका नायक अनमोल केसी अभिनित फिल्म हो ’कृ’ । यसअघि भाद्र ८ गतेलाई रिलिज कन्फर्म गरिएको ’कृ’को केहीदिन अगाडि फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै कात्तिक ३ गतेलाई रिलिज फाइनल गरिएको छ ।
फस्टलुक पोस्टरमा देखिएको अनमोलको सिक्सप्याक शरीरले पनि ’कृ’ प्रतिक्षित बनेको छ । अल्छी हिरोको रुपमा चिनिने अनमोलले ’कृ’मा गज्जबकै दुःख गरेको फस्टलुक पोस्टरबाट नै देख्न सकिन्छ । ’कृ’को फस्टलुकमा अनमोलको लामो कपाल, बढ्दै गरेको जुँगा, कसिलो ज्यान, रिसाहा अनुहार निकै आकर्षक देखिन्छ । अहिले नेपाली सिनेवृतमा यो बहस सुरु भएको छ कि यदी ’छक्का पन्जा’को रेकर्ड कुनै फिल्मले तोड्न सक्छ भने त्यो ’कृ’ हो ।
हाल छायांकन भैरहेको यो फिल्मको लागत झण्डै ३ करोड पुग्ने निर्माण पक्षको अडकल छ । फिल्मको लागत ३ करोड पुगे लगानी सुरक्षित गर्न ’कृ’ले ५ करोडको आसपासमा व्यापार गर्नुपर्छ अनि ’छक्का पन्जा’को रेकर्ड तोड्न १८ करोड । के सक्ला ’छक्का पन्जा’को रेकर्ड तोड्न ’कृ’ले ? यो त अब ’कृ’ रिलिजपछि मात्र थाहा हुनेछ । ’कृ’मा अनमोलले नव(नायिका आदिती बुढाथोकीसँग रोमान्स गरेका छन् । फिल्मलाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका हुन भने सुवास गिरी र भुवन केसीले संयूक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।
‘२ रुपैयाँ’ को अर्को गीत सार्वजनिक
सरकारले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग नौ वर्षमा निर्माण गर्ने
पोखराको मध्ये भागमै भासियो ( भिडियो सहित )